कात्तिक ४, काठमाडौं । मंगलवारको कारोबारमा सोमवारको भन्दा १२ दशमलव ४७ अंक बढेर नेप्से परिसूचक १ हजार ५८२ दशमलव ८४ विन्दुमा पुगेको छ ।
सोमवार १३ दशमलव ५८ अंक बढेर १ हजार ५७० दशमलव ३८ विन्दुमा नेप्से बन्द भएको थियो । यो साता आइतबार घटेको बजार सोमवारदेखि निरन्तर बढीरहेको छ ।
मंगलवार नेप्से परिसूचक सँगै ठुला कम्पनीहरुको कारोबार मापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि २ दशमलव ४० अंकले बढेर ३१३ दशमलव २९ विन्दुमा पुगेको छ । सोमवारको तुलनामा मंगलवार कारोबार रकम पनि बढेको छ ।
मंगलवार १९३ ओटा कम्पनीको १८ हजार ४२६ पटकको व्यापारमा रू. १ अर्ब २४ करोड १२ लाख ४२ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । सोमवार यो रकम रू. ९७ करोड ९० लाख ९४ हजार रहेको थियो ।
चाडपर्व नजिकिदै गर्दा शेयर बजारमा लगानी पनि पछिल्लो समय कम हुँदै गएको छ । दैनिक रू.२ अर्बभन्दा माथिको शेयर कारोबार हुँदै आएको शेयर बजारमा पछिल्लो समय कारोबार रकममा कमि आएको छ ।
मंगलवारको कुल कारोबारमा सर्वाधिक हिस्सा अरुण काबेली पावरको रहेको छ । उक्त कम्पनीको रू. ८ करोड ८२ लाख ९२ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो ।
यो दिन सर्वाधिक रकमको कारोबार गर्ने कम्पनीमध्ये दोस्रो नम्बरमा अपि पावर रहेको छ । उक्त कम्पनीको यस दिन रू. ७ करोड ६५ लाख ८५ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।सर्वाधिक रकमको कारोबार गरेको अरुण काबेली पावरको शेयरमूल्य पनि यो दिन प्रतिकित्ता रू. ९ ले वृद्धि भई अन्तिम मूल्य प्रतिकित्ता रू. २६८ कायम भएको छ ।
मंगलवार दोहोरो अंकले बढेको बजारमा चार ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य ९ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । कारोबारको पाँचौ दिनमा सर्वाधिक शेयरमूल्य जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालको बढेको छ । उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य ९ दशमलव ९१ प्रतिशत अर्थात प्रतिकित्ता रू. ४४ ले वृद्धि भई अन्तिम मूल्य प्रतिकित्ता रू. ४८८ कायम भएको छ ।
त्यस्तै माउण्टेन हाइड्रोको शेयरमूल्य यो दिन ९ दशमलव ६६ प्रतिशतले वृद्धि भई अन्तिम मूल्य रू. १९३ पुगेको छ भने हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरमूल्य ९ दशमलव ६० प्रतिशत बढेर अन्तिम मूल्य रू. १३७ पुगेको छ ।
मंगलवार जोशी हाइड्रोको शेयरमूल्य पनि ९ दशमलव ४० प्रतिशतले बढेर अन्तिम मूल्य रू. १२८ कायम भएको छ । यस दिन नेपाल फाइनान्स र रिलायन्स फाइनान्सको शेयरमूल्य करीब २ प्रतिशतले घटेको छ ।
नेपाल फाइनान्सको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ६ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. ३१७ र रिलायन्स फाइनान्सको प्रतिकित्ता रू. ३ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. १८० कायम भएको हो ।
मंगलवार कारोबारमा आएका सबै समुहको परिसूचक बढेको छ । यो दिन जलविद्युत् समुहको परिसूचक सर्वाधिक १ दशमलव ९६ प्रतिशतले बढेको हो । त्यस्तै बैंकिङ्को शून्य दशमलव ५९ प्रतिशत, व्यापारिकको शून्य दशमलव ४८ प्रतिशत, होटलको शून्य दशमलव ९१ प्रतिशत, विकास बैंकको शून्य दशमलव ९६ प्रतिशत, वित्तको शून्य दशमलव ४६ प्रतिशत, निर्जीवनको शून्य दशमलव ६८ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको शून्य दशमलव ८१ प्रतिशत, अन्यको १ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत, लघुवित्तको शून्य दशमलव ६१ प्रतिशत , जीवन बीमाको शून्य दशमलव ७७ प्रतिशत र म्युचुअल फण्डको परिसूचक १ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत बढेको छ ।